Dhijitari Kugadzira | Zvigadzirwa & Zvishoma-Vhoriyamu Kugadzira Zvikamu - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
Nezvedu / Ndivanaani Tiri
Createproto yakavambwa munaJune 2008 na Simon Lau, Mechanical Injiniya uyo aida kudzikisira zvakanyanya nguva yaitora kuwana jekiseni-rakaumbwa epurasitiki prototype zvikamu. Mhinduro yake yaive yekugadzirisa maitiro echinyakare ekugadzira nekugadzira software yakaoma iyo yaitaurirana netiweki yemagayo nemadhindaini. Nekuda kweizvozvo, mapurasitiki nesimbi zvikamu zvaigona kugadzirwa muchikamu chidiki chenguva yati yamboitora kare. nechinangwa chekuzunza kufunga kwakajairika mune yekugadzira nyika. Kunyangwe isu patakawedzera mashandiro edu kutenderera pasirese, mweya iwoyo unoramba uchitityaira. Nhengo yega yega yetimu yedu yehutungamiriri yakazvipira kupokana nechimiro chezviitiko mukumira kusingaperi kwekuvandudza mashandiro atinoita vatengi vedu.
Kwemakore gumi anotevera, isu taizoenderera nekuwedzera yedu jekiseni kuumbwa hamvuropu, kuunza nekukurumidza-dzoka CNC machine.
Muna 2016, isu takaparura maindasitiri-giredhi 3D yekudhinda masevhisi kubvumidza vagadziri vezvigadzirwa, vagadziri, uye mainjiniya nzira iri nyore yekufamba kubva kwekutanga prototyping kuenda kune yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa.
CHIONO CHEDU - Kurerutsa manufacuring maitiro pasina kukanganisa hunhu.
CHINANGWA CHEDU - Kupa kuendesa panguva yakakodzera yemhando yepamusoro chigadzirwa kune edu epasirese vatengi.
Mamwe emakambani akakurisa pasirese anotendeukira kwatiri pavanenge vachida zvinodhura, zvakagadzirwa-zvakagadzirwa zvikamu pane yakasimba purogiramu. Uye hazvisi chete nekuti isu tiri kunakidzwa kushanda pamwe. Imhaka yekuti isu takatsanangura kugadzira kwakareruka.
TINONYANYA BHINESI SEZVINOGARA
PaBearproto, tinoda kutaura kuti hatisi shopu yababa vako. Isu takabvisa zvipingamupinyi zvebhizimusi-seyakajairwa- nguva refu dzekutungamira, echinyakare maitiro, maitiro asingachinjiki, hunhu husina kuvimbika- kutarisisa kushanda kwedu kwese pauri: zvaunoda, zvirevo zvako, bhajeti yako, uye nguva yako.
Zvikwata zvedu zvekutengesa uye zvevatengi zvinowanikwa kubva 7am kusvika 6:30 pm CST, Muvhuro kusvika Chishanu, kubatsira nemirairo uye kupindura chero mibvunzo nezve masevhisi edu. Iwe unogona zvakare kutibata nesu online chero nguva.
Factory Wedzerai: 3rd Kuvaka, Tanglian 3 Street, Tangxia Town, Dongguan, 523710 China.